Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်)
Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Tildiem® ကို ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းကို ကာကွယ်ကုသ ရန် အသုံးပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း ကြောင့်ဖြစ်သော ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း နှင့် ဆက်တိုက် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း (Prinzmetal’s angina) တွင်ဖြစ်သည်။
Tildiem® ကို အခြားနေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးပြားကို ဖိခြေခြင်း၊ ချိုးခြင်း၊ ဝါးစားခြင်း မလုပ်ရ။ Tildiem® ကို ရေတစ်ဖန်ခွက်ဖြင့် မျိုချပါ။
Tildiem® ကို ဘယ်လိုသောက်ရမလဲကို ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Tildiem® ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Tildiem® ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Tildiem® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Tildiem® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါး ပညာရှင် နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေပါက သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက် နေပါက။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် ကလေးရှိပါက ဆရာဝန်ထောက်ခံသော ဆေးများ ကိုသာ သောက် သင့်သည်။
သင်သည် အခြားဆေးများ သောက်နေပါက။ ဆေးဖက်ဝင်နှင့် တွဲဖက်ဆေးများ စသော ညွှန်ကြား ချက်မရှိဘဲ ဝယ်နိုင်သော ဆေးများအားလုံး ပါဝင် သည်။
Tildiem® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓာတ်မတည့်ပါက။
အခြား ဖျားနာခြင်း၊ ရောဂါ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ ရှိပါက
အစားအစာ၊ ဆိုးဆေး၊ တိရစ္ဆာန် စသည်တို့ဖြင့် ဓာတ်မတည့်မှု ရှိပါက
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် ဤဆေး သုံးပါက ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ ဤဆေး မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
ဤဆေးသည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစား အသောက် နှင့် ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေး အဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင် များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်။
ဆေးသည် မိခင်နို့ကို ဖြတ်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နို့စို့ ကလေးများတွင် ပြင်းထန်သော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်သည်။ မိခင်အပေါ် ဆေး၏ အရေးကြီးမှုကို စဉ်းစားပြီး ဆေးကို ဖြတ် သင့်သလား နို့တိုက်ခြင်းကို ဖြတ်သင့်သလား ဆုံးဖြတ်ပါ။
သင်သည် ကိုယ်ဝန်ရှိပါက သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေ ရပါက ဤဆေး မသုံးမီ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်သည်။
ရောင်ရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ပူစပ်ခြင်း
လှုပ်ရှားမှုများ ပုံမမှန်ခြင်း၊ ထိန်းမရခြင်း
အရေပြားပေါ်တွင် ယားဖုများ ထွက်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tildiem® သည် လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
Tildiem® နှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်သော ဆေးအချို့မှာ-
နှလုံးနှင့် သွေးတိုးကျဆေးများ ( ဥပမာ- beta blockers, digoxin, amiodarone, nitrates)
Rifampicin ( ပဋိဇီဝဆေး)
Cimetidine or ranitidine ( ပြည်တည်နာများ အတွက်)
Diazepam ( စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အရက်ဖြတ်ခြင်း သို့ မဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း တို့အတွက်)
Carbamazepine ( စိတ်နှစ်ခွရောဂါ သို့မဟုတ် အတက်ရောဂါ အတွက်)
Lithium ( စိတ်နှစ်ခွရောဂါ အတွက်)
Theophylline ( ပန်းနာရင်ကြပ် နှင့် အခြား အသက် ရှူခြင်း ပြဿနာများအတွက်)
ရူသွင်းရသော မေ့ဆေး ။ ဥပမာ- halothane, isoflurane, enflurane
သွေး ကိုလက်စထရော ဆေး (simvastatin, lovastatin)
Benzodiazepines သို့မဟုတ် စိတ်ငြိမ်ဆေးများ ( ဥပမာ- midazolam, triazolam )
Corticosteroids ( ဥပမာ- methylprednisolone, prednisone, cortisone)
နှလုံးခုန်သံ မမှန်ခြင်းကို ကုသသော ဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလား
Tildiem® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓာတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) နဲ့ ဓာတ်ပြုနိုင်သလဲ
Tildiem® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ထို သက်ရောက်မှု သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။
သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါတို့ရှိပါက အသိပေးပါ။
နှလုံးခုန်သံ စည်းချက် မမှန်ခြင်း
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ရုတ်တရက် ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် နှလုံးနှင့် ဆိုင်သော ရောဂါများ
ကျောက်ကပ် သို့မဟုတ် အသည်း လုပ်ငန်း မကောင်း ခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပုံမှန်ပမာဏသည် ဆေးတစ်ပြား ( ၆၀ မီလီ ဂရမ်) ကို နေ့စဉ် သုံးကြိမ်ဖြစ်သည်။
လိုအပ်ပါက ခွဲထားသော ဆေးပမာဏကို တစ်နေ့ ၃၆၀ မီလီဂရမ်အထိ တိုးနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့် မတည်ငြိမ်သော ရင်ဘတ်နာခြင်း ရှိသော လူနာများ တွင် တစ်နေ့လျှင် ၄၈၀ မီလီဂရမ် အထိ မြှင့်ပြီးပေးနိုင်သည်။
အသက်ကြီးသူများ နှင့် အသည်း သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ် မကောင်းသည့် လူနာများ
ထောက်ခံထားသော စတင်ပေးသည့် ပမာဏသည် ဆေးတစ်ပြား (၆၀ မီလီဂရမ်) ကို တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ဖြစ်သည်။
ဤလူနာများတွင် နှလုံးခုန်နှုန်းကို ပုံမှန်တိုင်းတာ သင့်သည်။ နှလုံးခုန်နှုန်းသည် တစ်မိနစ်လျှင် ၅၀ အောက် ကျပါက ဆေးပမာဏကို မမြှင့်သင့်ပါ။
ကလေးတွေအတွက် Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာ များအတွက် ဆေးညွှန်းမှာ အတိအကျ မရှိ သေးပါ။ ကလေးများအတွက် စိတ်မချရပါ။ အသုံးမပြုခင် ဘေးကင်းမှုကို အပြည့်နားလည်ရန် အရေးကြီးသည်။ ပိုမို သော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Tildiem (တေးလ်ဒီရမ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Tildiem® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
Tildiem® ၆၀ မီလီဂရမ် diltiazem Modified- Release Tablets
အရေးပေါ်အခြေအနေ သို့မဟုတ် ဆေးအလွန်အကျွံ သောက်မိပါက ဒေသတွင်း အရေးပေါ်ဌာနကို ခေါ်ပါ။ သို့ မဟုတ် အနီဆုံး အရေးပေါ်အခန်းကို သွားပါ။
အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သင်သောက်နေသော ဆေးများ အားလုံး ( သောက်ရန် ညွှန်ကြားထားသော ဆေးများ နှင့် အလွယ်တကူဝယ်ရသော ဆေးများ) ၏ စာရင်းကို ယူလာရန်အရေးကြီးသည်။
Streptase® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။
Tildiem® (diltiazem hydrochloride). http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/7029/SPC/Tildiem+60mg+Modified-Release+Tablets. Accessed November 10, 2016
Tildiem® (diltiazem hydrochloride). http://www.meppo.com/pdf/drugs/1723-TILDIEM-1321634812.pdf. Accessed November 10, 2016
Tildiem® (diltiazem hydrochloride). http://reference.medscape.com/drug/cardizem-cd-diltiazem-342374#6. Accessed November 10, 2016